UDomki Sarnówka Białka Tatrzanska / Tatry / Poland - I-Airbnb
UDomki Sarnówka Białka Tatrzanska / Tatry / Poland
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguPatrycja
Ikhabhinethi yelog yengingqi ilungele abantu abayi-6 (max. 8). I-cottage ekumgangatho ophezulu yindawo efanelekileyo yokuqala yokuhamba ukuya kwiiNtaba zeTatra okanye ukutyibilika. Uya kufumana izinto ezininzi ezinomtsalane kule ndawo, kwaye uxolo kunye nokuzola esinakho apha kuqinisekisa ukuba uyakufumana amaxesha ongalibalekiyo apha.
Indawo elungileyo, umgangatho ophezulu, i-wi-fi yasimahla, indawo yokupaka yasimahla, indawo ebiyelweyo, uxolo nokuzola, indawo yomlilo, umbono omhle, indawo efanelekileyo yokuqalisa ukutyibiliza okanye ukukhwela intaba, iindawo ezininzi ezinomtsalane kwindawo leyo.
4.97 out of 5 stars from 41 reviews
4.97 · Izimvo eziyi-41
Indawo esondeleyo kwiiNtaba zeTatra (iintaba eziphakamileyo ePoland) kunye neeNtaba zePieniny zenza ukuba kube yindawo efanelekileyo yokuqala kwiindlela zeentaba. Indawo esihlala kuyo inethambeka kunye neendawo zokutyibiliza ekhephini, nto leyo ethetha ukuba abatyibilizi ebusika baneparadesi yabo apha. Kwaye emva koko uya kuphumla kumachibi ashushu
Umbuki zindwendwe ngu- Patrycja
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Czarna Góra